चर्को बिरोधपछि लाईभ आईन् टीका सानू, कृष्ण कडेलले किन मागे माफी ? (भिडियो सहित) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/चर्को बिरोधपछि लाईभ आईन् टीका सानू, कृष्ण कडेलले किन मागे माफी ? (भिडियो सहित)
चर्को बिरोधपछि लाईभ आईन् टीका सानू, कृष्ण कडेलले किन मागे माफी ? (भिडियो सहित)
कार्यक्रम इन्द्रेणीबाट चर्चामा आएकी गायिका टिका सानु र इन्द्रेणीका संचालक तथा गायक बिच सामान्य विषयमा भएको कुराकानीको विषय सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ । गायक तथा प्रखर वक्ता रमेश प्रसाईको विबाहमा जाने क्रममा हतारमा रहेका बेला कृष्णले कार्यक्रम सम्पादनमा केही त्रुटि भएको देख्न सकिन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सुटिगंको क्रममा भएको केही सामान्य बादविबादका केही दृश्यहरु सम्पादनमा समस्या भएका कारण टीका सानुको सामाजिक संजालमा चर्को बिरोध भैरहेको छ । सो कार्यक्रममा टिकाले इन्द्रेणी र कलाकारहरु एक अर्काका परिपूरक भएको तर इन्द्रेणीले मात्रै नचिनाएको बताइन् । बिरोधले उग्र रुप लिदै गएपछि टिका सानु लाईभमा आएकी छन् । उनले कृष्ण कडेललाई पनि लाईभमा जोडेर यस बिषयमा बिस्तृत कुराकानी गरेकी छन् ।